Waxay bixisaa cabsi !!, telefoonada casriga ah ee ugu fiican ee la bixiyo Halloween. | Androidsis
Waxay bixisaa cabsi !!, telefoonada casriga ah ee ugu fiican ee la bixiyo Halloween.
Fasax kasta waa sabab, inta jeebku u oggol yahay, in wax naga siiya. Toddobaadyo ka hor, Maalinta Ra'iisul-wasaaraha ee Amazon ayaa loo dabaaldegay, laba maalmood oo ay dhammaan dadka isticmaala Amazon Prime ay gacanta ku hayeen tiro badan oo dalabyo ah, dalabyo kooban oo loogu talagalay dadka isticmaala Ra'iisul-wasaaraha.
Axada soo socota ayaa la xusaa Hallow maalin nasiib-darro ay ugu wacan tahay cudurka loo yaqaan 'coronavirus', waxaan u dabaaldegi doonnaa si ka duwan sidii hore. Haddii aad ka fekereyso inaad cusbooneysiiso taleefankaaga casriga ah, waad awoodaa ka faa'iideyso dalabyada kala duwan ee taleefanka in Amazon ayaa noo diyaarineysa maalmaha soo socda.
Hadaad raadineyso terminal dhexdhexaad dhexdhexaad ah qiimo soo jiidasho leh, waxqabadka sare iyo tayada ay soo saareyaal aad u yar ku siin karaan, the Galaxy A51 waa terminaalka aad raadineyso, terminal qiime leh 260 euro at Amazon. Terminalkani wuxuu na siinayaa shaashad 6,5-inji ah oo ay la socoto teknolojiyadda AMOLED, oo leh FullHD + qaraar, 4 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo ah keyd gudaha ah
Qaybta dambe ee sawir qaadista waxay ka kooban tahay a 48 MP dareeraha ugu weyn, 12 MP xagal ballaadhan, 5 MP kamero kamero iyo 5 MP aaladda qoto dheer si loo bixiyo asalka sawir-gacmeedyada aan diirada la saarin. Kaamirada hore waxay gaareysaa 16 MP. Batariga, oo ah ilo kale oo ka mid ah terminaalkan, wuxuu gaarayaa 4.000 mAh oo la jaan qaadi kara 15W xawaare dhakhso ah Gudaha, waxaan ka helaynaa processor 8-core ah oo ay soo saartay shirkadda Samsung. Waxay leedahay NFC si loogu bixiyo lacagta moobilka.
Ka iibso Samsung Galaxy A51 qiimo dhan 259,58 euro Amazon.
Haddii aad rabto inaad bilowdo inaad ku raaxeysato tiknoolajiyada 5G qof kale, Samsung waxay na siisaa isla qaabkan nooca 5G, Galaxy A51 5G, moodal qiimihiisu yahay 329 euro. Si ka duwan qaabka 4G, nooca 5G wuxuu na siinayaa batari 4.500 Mah ah oo la jaan qaadi kara deg deg ah ilaa 15W. Nooca 5G ee Galaxy A51 wuxuu na siinayaa shaashad 6,5-inji ah oo ay la socoto teknolojiyadda AMOLED, oo leh FullHD + qaraar, 4 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah oo gudaha ah.
Qaybta dambe ee sawir qaadista waxay ka kooban tahay a 48 MP dareeraha ugu weyn, 12 MP xagal ballaadhan, 5 MP kamero kamero iyo 5 MP aaladda qoto dheer si loo bixiyo asalka sawir-gacmeedyada aan diirada la saarin. Kaamirada hore waxay gaareysaa 16 MP Dareeraha faraha ayaa ku yaal shaashadda. Waxay leedahay NFC si loogu bixiyo lacagta moobilka.
Ka iibso Samsung Galaxy A51 5G qiimaha 329,90 euro ee Amazon
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh oo Samsung ay noo diyaarisay waa Galaxy A21s, oo ah terminal leh a Shaashadda 6,5-inji waa xallinta HD +, 5.000 batari Mah socon kara 15W xukun deg deg ah iyo a qiimaha 179 euro.. Waxay leedahay NFC si loogu bixiyo lacagta moobilka.
Dhanka dambe, waxaan ka helnaa seddex dareemayaal moduleka sawirka: 48 MP ugu weyn, 8 MP xagal ballaaran oo ballaadhan iyo a 2 MP shidma qoto dheer. Goobta keydintu waa 64 GB, oo ah meel aan ku ballaarin karno adoo adeegsanaya kaarka microSD illaa 512 GB.
Iibso Samsung Galaxy A21s oo ah 179 euro Amazon
Kala badh u dhexeeya Galaxy M21s iyo Galaxy A51 waxaan helnay ah Galaxy A31, terminal leh shaashad AMOLED 6,4-inji ah, 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah, meel aan ku ballaarin karno adoo adeegsanaya kaarka microSD. Batariga 5.000 Mah wuxuu la jaan qaadayaa 15W xawaare degdeg ah.
Dhanka dambe, waxaan ka heleynaa saddex dareemayaal oo ku jira qaybta sawirka: 48 MP ugu weyn, 8 MP xagal ballaaran oo ballaaran iyo a 2 MP shidma qoto dheer. Qiimaha Glaxy A31 waa 215 euro on Amazon. Waxay leedahay NFC si loogu bixiyo lacagta moobilka.
Iibso Samsung Galaxy A41 215 euro oo ah Amazon
Haddii aadan jeclayn Xiaomi, ikhtiyaarka kale ee xiisaha leh ee suuqa ku yaal waxaa laga helayaa Xiaomi. Xiaomi waxay naga dhigeysaa meeshaan bixino 199 euro el Xiaomi Redmi 9, moodel leh 4 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah. Ma laha NFC (tiknoolajiyad ay dhammaan noocyada Samsung na siinayaan), shaashadda waa 6,53 inji, waxaa maamula processor-ka MediaTek iyo moduleka kamaraddu wuxuu ka kooban yahay 4 dareemayaal oo kala ah 48, 8, 2 iyo 2 MP.
Ka iibso Xiaomi Redmi Note 9 oo ah 199 euro on Amazon.
Terminal xiiso leh oo ay Xiaomi na siiso ayaa laga helaa Xiaomi Mi Note 10, Terminal isku xira NFC chip si lacag looga qaato mobilka, 6GB RAM, keyd 128GB ah iyo Snapdragon 730G oo ah processor.
Batariga wuxuu gaaraa 5260 Mah iyo moduleka kamaraddu wuxuu ka kooban yahay 5 lenses ee 108, 5, 12, 20 iyo 2 MP, sidaa darteed waxay la qabsanaysaa baahi kasta oo aan qabno xilli kasta. Shaashadu waxay gaareysaa 6,47 inji nooca AMOLED iyo 90Hz oo ah shaashadda shaashadda.
Ka iibso Xiaomi Mi Note 10 qiimaha 443 euro ee Amazon
Sharad xiiso leh hadaanan rabin lacag badan, waxaan ka helnaa Realme 7, taleefan casri ah oo wata shaashad nooca LCD-ga ah oo 6,5-inji ah, oo ay la socdaan 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah oo ay ku shaqeeyso processor 8-core MediaTek ah.
Qeybta sawirada, waxaan ka helnaa a 48 MP kamaradda weyn iyo kamaradda hore ee 12 MP. Batariga wuxuu gaaraa 5.000 Mah oo wuxuu taageeraa xawaareyn degdeg ah illaa 30W. Qiimaheedu waa 179 euro. Waxa kale oo jira nooc 6 GB oo RAM ah oo ah 199 euro iyo nooc kale oo leh 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah oo loogu talagalay 249 euro.
Nooca Pro ee Realme 7 waxaa maamula processor-ka 720G oo ka socda Qualcomm oo lagu daray 8GB oo RAM ah iyo 128GB oo ah kaydinta gudaha ah. Kaameradda gadaal ee ugu weyn waxay gaareysaa 64 MP dareeraha ugu weyn, oo ay wehliyaan 3 dareemayaal dheeri ah oo ah 8, 2 iyo 2 MP siday u kala horreeyaan, halka dareemaha hore uu yahay 32 MP. The Shaashadda nooca AMOLED waxay gaaraysaa 6,4 inji Iyadoo la adeegsanayo qaraarka 'FullHD + resolution', batroolka 4.200 mAh wuxuu taageeraa 65 W xawaare degdeg ah.
Iibso Realme 7 Pro oo ah 279 euro oo ah Amazon
Kooxda Xioami mi Band ayaa tan iyo jiilkii ugu horreeyay noqday jijin qiimaynta-iibinta ugu fiican adduunka oo dhan. Waxaan hadda ku jirnaa Mi Band 5 jijin la heli karo 32 euro Amazon, oo leh shaashad midab leh taasna waxay noo oggolaanaysaa inaan la soconno howlaheena maalinlaha ah, oo ay ku jirto hurdada sidoo kale waxay na ogeysiineysaa wicitaannada iyo farriimaha tooska gacanta, inkasta oo aanan ka jawaabi karin laakiin waan akhrin karnaa
Ka iibso Xiaomi Mi Band 5 32 euro oo ah Amazon
Beddelka xiisaha leh ee Xiaomi's Mi Band 5, leh shaashad ka weyn waxaan ka helnay Amazfit Bip Smartwatch, smartwatch oo leh nolol batari oo dheer oo ka kooban GPS, dareemayaasha garaaca wadnaha, GPS waxaana lagu heli karaa 4 midab.
Iyada oo loo marayo Amazfit Bip Smartwatch waan rhel farriimaha qoraalka, hel e-mayl, wicitaanno iyo nooc kasta oo ogeysiis ah. Sidoo kale waa qalab aad u fiican la soco jimicsiga waxaan maalin walba ku sameynaa baaskiil, socod, orod ama qolka jimicsiga. The Amazfit Bip Smartwatch waxaa lagu qiimeeyaa 59 euro oo ah Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Waxay bixisaa cabsi !!, telefoonada casriga ah ee ugu fiican ee la bixiyo Halloween.
Ku hoggaami kooxaha degdegga ah qabatimiyaha iyo qaboojiyeyaasha weyn ee 112 Operator
Kaaliyaha codka Bixby ee Samsung wuxuu helayaa isbeddel naqshad weyn